धुमधामसंग भयो कुखुराको बिहे – सडक मिडिया
धुमधामसंग भयो कुखुराको बिहे
सडक मिडिया February 19, 2020 0
एजेन्सी: बेला बेलामा हामीहरुले अनौठो र रोचक कुराहरु सुनिरहेका हुन्छौ । त्यी कुराहरु कुनै हामीलाई पत्यार लाग्छ कुनै लग्न मुस्किल पनि पर्छ । त्यस्तै एउटा अनौठो कुरा हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा भएको छ । तपाइले कतै सुन्नु भएको छ ? पशुपन्छीको समेत विहे भएको खबर ? हो सायदै सुन्नु भएको छैन र सुन्यो भने अचम्म पनि लग्न सक्छ ।
सामान्यतया मानिसहरुको बिहे हुने कुरा त सामान्य हो तर भारतमा कुखुराको समेत बिहे भएको छ । छत्तीसगढमा एक भव्य समारोहबीच भाले र पोथी कुखुराबीच बिहे गराइएको हो । पहिले पनि गधा, कुकुर, बाँदर लगायतको बिहे भएको खबर पनि बेला बेला आएकै हुन् । अब यति मात्र भएन कुखुराको पनि बिहे गरियो त्यो पनि धुमधाम संग । उक्त बिहेको चर्चा यतिसम्म भयो कि पूरै गाउँ र आसपासका गाउँहरुमा पनि यो खबर फैलियो ।
मासु तथा अण्डाका लागि निकै लोकप्रिय तथा विशेष जातको मानिने कडकनाथ प्रजातिका भाले र पोथी कुखुराबीच बिहे गराइएको थियो । छत्तीसगढको दन्तेवाँडास्थित हिरानारा गाउँमा हिन्दु परम्परा अनुसार कालिया र सुन्दरीबीच बिहे सम्पन्न भएको थियो । प्रजातिको बेहुला कुखुराको नाम कालिया हो भने बेहुलीको नाम सुन्दरी । बिहेमा सरसामानको जोरजाम मानिसको भव्य बिहेमा भन्दा कम थिएन । बिहेका लागि निमन्त्रणा कार्ड पनि छपाएर वितरण गरिएको थियो । बिहेपछि नाचगानसँगै भव्य भोजको आयोजना गरिएको थियो ।
Previous Post: ढकारी गाउँपालिकाको तेस्रो वडाको रूपमा वडा नम्बर ७ छाउगोठ मुक्त वडा घोषणा
Next Post: सञ्चारमन्त्री बास्कोटाकाे कमिसनकाे अडियाे बाहिरियाे (अडियाे सहित )